Azonao atoro ahy ve ny hahombiazanao amin'ny Amazon amin'ny fampiasana angon-drakitra finday avy amin'ireo mpifaninana amiko?
Eny, izany no fanontaniana mety. Midika izany fa rehefa ampiasaina marina, ny tahirin-javamaniry amazonin'i Amazôna momba ny niche akaiky indrindra na ny mpifaninana aminy dia mety ho ny teti-pitondrantenanao amin'ny fahombiazana ara-barotra farany eo. Ary mino aho fa ny fanalahidin'ny valin'ny varotra ambony indrindra dia azo trandrahina foana amin'ny ankamaroan'ny teny fanalahidy ampiasain'ny mpivarotra mivantana, miaraka amin'ny tetika mivelatra sy marefo. Ny zava-drehetra dia ny hoe ny tanjona iray manontolo dia mora ho lasa mofomamy kely fotsiny - ny ilainao dia ny mahazo ny fitaovana mety amin'ny fanaovana fikarohana tsara fifaninanana ary farany dia lasa fahombiazana amin'ny Amazon amin'ny fampiasana ny angon-drakitra hitan'ny mpifaninana aminao. Noho izany, amin'ny fiheverana fa ny zava-tsarotra indrindra eto dia ny mitady vahaolana mifanentana amin'ny ankamaroan'ireo tolotra isan-karazany hita ao amin'ny Internet. Izany no mahatonga ahy etsy ambany hampiseho aminao ireo fitaovana rindrambaiko tsara indrindra azoko hanatsaranana ny zava-drehetra - na ho an'ny fikarohana lalindalina momba ny fifaninana, ny fomba tsara indrindra hanehoana ny fahafaha-manao ho an'ny kickstart, sy ny vahaolana maimaim-poana ilaina mba hitarihana ny fitarihana ao amin'ny orinasa na .
Mamela ahy hanomboka amin'ny fahafaha-manao fahafaham-po amin'ny Amazon amin'ny finday momba ny vokatra amin'izao fotoana izao, ary ny fifanarahana henjana azo amidy eny an-tsena. Ity dia miditra amin'ny fitaovana JungleScout! Ity rindrambaiko ity dia fantatra amin'ny hoe safidy tsara indrindra ho an'ny fanadihadiana momba ny angona ilaina amin'ny fisorohana ireo fahafaha-manao mpaninjara marefo amin'ny Amazon, ahitana ny lohahevitra tsara indrindra izay mety ho tafiditra ao amin'ny lisitry ny vokatra misy anao amin'izao fotoana izao. Ny tena izy - afaka mamadika mora foana an'io asa tena manahirana io ianao hanarahanao ny mombamomba ireo mpanohitra mahomby anao amin'ny fomba tsotra sy tsotra izay mihazakazaka amin'ny fomba mandeha ho azy.
Mitazona ny fampihetseham-pandrefesana tsara indrindra sy ny vahaolana momba ny Keyword
Ny fitaovana maoderina dia hanampy anao hahita sary lehibe momba ny Amazon, ary koa angamba ny hevi-dehibe azo tsapain-tanana eto mikasika ny teny fanalahidy manan-danja sy ny lava-pitenenana lavalava izay efa natombok'ireo mpanohitra anao. Ny tena zava-dehibe - Hitako ny sakana mbola mahery kokoa rehefa tonga amin'ny PPC ny fanatsarana ny fampielezan-kevitra ho an'ny fahombiazany. Raha ny marina, io fitaovana io dia nanampy ahy be dia be tamin'ny fitantanana ny risika, noho ny tombana azo antoka sy azo antoka momba ny tombom-barotra tombon-tsoa, ​​ny vola miditra isam-bolana, ny haingam-pivarotana, ny fidiram-bola avy amin'ny FBA, etc.
Soa azo avy amin'ny fanatontosana haingam-pahefana avo indrindra
Ny lahatsoratra farany tiako hampiseho anao androany dia Keepa. Io dia fitaovana mora ampiasaina mora ampiasaina amin'ny Amazon. Ny serasera madio sy mazava dia tsy misy fanazavana mazava. Na izany aza, avelao aho hitanisa ireo singa fototra nampanantenin'ny programa Keepa pricing - farafaharatsiny noho ny fahafenoana. Ankoatr'izany, ity mpamantatra ny vidin'ny vidiny ity dia afaka manampy anao amin'ny sehatra ofisialy misy ifandraisany amin'ny fampiasana karazana fampiasana tsara, fampandrenesana ara-potoana momba ny fihenam-bidy / fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fivoaran'ny fahafahana, fomba fijery mora azo avy amin'ny alalan'ny fampitaovana ny tranokala, asa fijery haingana, hahita ny fifanarahana farany amin'ny Amazon ary mampitaha ny vidiny tsy ho ela Source .